Public Procurement / Tender Notices | Shadananda Municipality
Home » Notices and Information » Public Procurement / Tender Notices
Public Procurement / Tender Notices
Submitted on: Mon, 04/04/2022 - 21:15
Read more about दिङ्ला सार्वजनिक शौचालय, दिङ्ला पार्क निर्माण कार्यको लागि दोश्रो पटक अनलाईन टेण्डर आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!
Submitted on: Wed, 02/16/2022 - 13:46
Read more about दिंला बसपार्क निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
Submitted on: Thu, 01/27/2022 - 13:56
Read more about १ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि दोश्रो पटक अनलाईन टेण्डर आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!
Submitted on: Wed, 01/19/2022 - 22:25
Read more about लमुखोला खानेपानी, ऐतिहासिक चामेश्वर पाटी निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
Submitted on: Thu, 01/13/2022 - 21:51
Read more about ठेक्का नं Shadmun/W/SQ/08/078/79 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
Submitted on: Sun, 01/09/2022 - 16:00
Read more about दिङ्ला बस पार्क, १ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि अनलाईन टेण्डर आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!
Submitted on: Fri, 12/17/2021 - 12:06
Read more about लमुखोला खानेपानी, ऐतिहासिक चामेश्वर पाटी तथा ४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि अनलाईन टेण्डर आह्वान गरिएको बारे सूचना !!!
Submitted on: Thu, 12/16/2021 - 19:59
Read more about बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
Submitted on: Tue, 11/30/2021 - 20:33
Submitted on: Mon, 11/22/2021 - 17:42
Read more about प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना !!!